Bogga ugu weyn TRF ee Saxaafadda 2018
Saxaafaddu waxay soo saartay Hay'adda Reward Foundation waxayna ku faafinaysaa ereyada ku saabsan shaqadayada oo ay ka mid yihiin: fasallada feejignaanta loola jeedo; wacitaanka wax-ku-oolka jinsiga ku salaysan ee dhammaan dugsiyada; u baahan tahay tababbar loogu talagalay bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka NHS ee ku saabsan daroogada foojignaanta iyo ka qayb qaadashada cilmi ku saabsan dhibaatooyinka galmada ee sababa galmada. Boggan wuxuu muujinayaa guulahayaga wargeysyada iyo khadka tooska ah intii lagu jiray 2018
10 Diseembar 2018. Horraantii Diseembar 2018 kooxda TRF waxay u safartay Budapest ee Hungary halkaas oo Mary Sharpe ay ku soo bandhigtay "Saamaynta sawir-gacmeedka Internetka ee Caafimaadka iyo Xiriirka" shirkii "Ka ganacsiga dadka ee Hangari: Caqabadaha taagan iyo mustaqbalka iyo dhaqanka ugu wanaagsan - Saamaynta Dunida Onlineka ah ”. ''AZ INTERNETES ÁLDOZATTÁ VALÁS HATÁRAI HARAAMI KA DUWAN EGYÉNRE EE A TÁRSADALOMRA ', Budapest, 3 December 2018.
Soo bandhigid buuxda ayaa la arki karaa halkan.
26 August 2018. Mary Sharpe waxay bixisay faallo khabiir ah oo ku saabsan kiiskan murugada leh ee Maxkamadaha Iskushishka. Qoraallada uu qoray Vic Rodrick. Bogagga 10 iyo 11 ee daabacaadda daabacan.
Gabadh cuna qabateyn ah ayaa wajahaysa nolosha xabsi kufsi ah oo lagu kufsaday gabdho yar yar iyo gabdho dhallinyaro ah oo uu la xiriiray warbaahinta bulshada.
Gavin Scoular ayaa ugu adeegsday Facebook, Snapchat iyo Skype in ay saaxiibo yihiin.
23-sano jir wuxuu ku bilaabi doonaa sheekooyin aan waxba galabsan - mararka qaarkood todobaadyo - si uu ugu guuleysto kalsoonida gabdhaha kahor inta aysan uur qaadin inay u diraan sawiro galmo.
Ka dibna wuxuu si qarsoodi ah u la kulmay si shakhsi ah isaga oo ku hanjabay inuu u diro sawirada sawirada 'caalamka oo dhan si uu u arko', ka hor inta uusan kufududayn iyo kufsi.
Waxaa lagu helay dambi ah Khamiistii kufsiga shan haween oo dhallinyaro ah - oo ay ku jiraan saddex dhibbanayaal oo aan dhalin xilligaas.
Xeerbeegtida Maxkamadda Sare ee Livingston ayaa sidoo kale ku xukuntay toban dambiyo kale, oo ay ka mid yihiin weerarka galmada, qaadashada sawirro aan sax ahayn iyada oo aan ogolaansho iyo hanjabaad u ah inay qaybiso sawirrada.
Intii lagu guda jiray tijaabo sagaal cisho ah, waxay u doodeen Stephen Borthwick, oo maxkamad lagu soo taagayo, maxkamad calaamad u ah 'Scoular' oo lagu yiraahdo "pedophile predofile" wuxuuna sheegay in markhaatiyadu ay ku soo bandhigeen ficilo isku mid ah oo ficiladiisa ah. Wuxuu hadalkiisa ku daray: 'Waxa uu ahaa iyaga oo daawanaya. Gavin Scoular ayaa ku fashilmay wada hadalka galmoodka ah iyaga oo si fiican u fahmay inay da'doodu ka yar tahay 16, da'doodu ka yartahay ogolaansho.
'Wuxuu waydiistay dhamaantood inay muujiyaan sawirro jirkooda qaawan. Xaaladaha qaarkood ayuu ka codsaday inay soo diraan sawirro.
'Waxa uu isticmaalaa sawirada habka lagu xakameynayo dabeecaddooda, si uu u helo waxa uu doonayo. Kiis kasta wuxuu u guuray si uu ula kulmo gabdhaha. Isagoo ogolaansho gaar ah ayuu la kulmay iyaga oo ah hal sabab - ku lug leh dhaqan galmo sharci darro ah.
Dhibbanaha ayaa sheegay in ay ahayd 13 marka Scoular, laga bilaabo Niddrie, Edinburgh, la xiriiray. Waxa uu ku duulay fariimo fara badan oo kufilan iyo codsiyo ka hor inta aanad waydiisan inay u dirto sawirro qaawan oo nafteeda.
Waxay tiri: "Wax yiraahdo maya isla markiiba laakiin wuu isweydiiyay oo way weydiisanayaa. Waxaan u sheegay inaanan rabin laakiin waxaan u diray sawir markii aan ahaa 14. Ma aqaano sababta.
'Ka dib markii aan u diro midka koowaad wuxuu ku hanjabay inuu u diro warbaahinta bulshada.
'Waxa uu igu yiri haddii aanan soo dirin sawir kale, waxa uu sawiri lahaa sawirka horayba u lahaa Facebook.
'Waxay iga dhigtay inaan dareemo inaan sameeyo. Ma aanan dooneynin in moobalkayaga oo dhan ka badan Facebook.
'Ka dib markii aan soo diray sawirka labaad wuxuu ka raaligeliyay isagoo sheegaya in uu sawirka ku dhejin lahaa Facebook, sidaasi darteed waan u dhaafay. "
Waxay ogolaatay inay tagto guriga Scoular, halkaas oo uu kufsadey.
Waxay tiri: 'Waxaan doonayay inaan ooyo laakiin waan ku hayay oo dhan. Waxaan ka cabsaday. Waxaan rabay inaan halkaan ka baxo sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan u sheegay inuu dhaawac yahay. Waxaan u sheegay inuu joojiyo. Wuu sii soconayaa. "
Dhibbanaha kale wuxuu ahaa 14 markii Iskuduwaha uu kula xiriiray iyada oo loo marayo webcam.
Markii ugu horraysay, sheekadoodii waxay ku saabsanayeen maalin walba, sida dugsiga, laakiin wuxuu ku hanjabay inuu been ka sheegayo asxaabteeda in ay galmoodeen haddii aysan u soo dirin sawir aan sax ahayn.
Waxay sheegtay in Scoular ay ku garaacday naasaheedii naasaheeda inta lagu guda jiray wadahadal video ah oo Skype ah, wuxuuna qaatay shey baaritaan ah
'Waxaan doonayay inaan ooyo. Waan baqay Waxaan u sheegay inuu joojiyo '
toogasho. Isticmaalidda sawir ahaan naceybka, wuxuu ku qasbay in ay la kulanto isaga oo u dhow Heeganka Badweynta ee Leith iyo jinsi ahaan ayay kufsadeen.
Dhibbanaha ugu da'da yar wuxuu ahaa 12 oo kaliya markii uu kula soo xiriiray warbaahinta bulshada oo uu ku qanciyay inuu la kulmo. Waxay ku socdeen Portobello Golf Course, halkaas oo uu dhunkaday oo soo qabteen - inkastoo uu ogaaday da'diisa.
Waxa uu sidoo kale u sheegay laba dhibbanayaal ah oo u shaqeynayay sidii naf badbaadiye ah oo loogu talagalay pools councils, baro caruurta inay dabaasho.
Iskuday ayaa sheegtey in uu ahaa 'qalad' oo ay dhibanayaashu u sheegeen 'been abuur xun' oo ku saabsan isaga. Wuxuu sheegay in dhammaantood ay ogolaadeen inay galmo sameeyaan.
Waxa uu qirtay in xilligii dembiyada, ee u dhexeeya 2010 iyo 2014, uu ahaa 'jinsi soo jiidatay gabdhaha yaryar' laakiin hadda waxay dareemeen 'cabsi' oo ku saabsan.
Waxa uu yiri: "Ma faraxsani waxa aan sameeyay. Laakiin waan ogahay wixii aan sameeyay, iyo wixii aan sameeyay waa qalad. "
Habeenkii hore, Mary Sharpe, oo ah madaxa fulinta ee kooxda ololaha loo yaqaan 'Reward Foundation', ayaa ka digay helitaanka iyo aqoonsi la'aanta - 'dabeecada qarsoodiga ah' - warbaahinta bulshada ayaa u ogolaatay in internetka uu noqdo mid aad u baahsan.
Waxay tiri: 'Way fududahay in qof la jiido erayada jacaylka iyo qurxinta internetka. Haddii nin uu codsado sawir, waa sahlan tahay in sawir loo diro. '
Ms Sharpe ayaa intaa ku daray in jilayaasha sida Kim Kardashian ay dhallinyarada u maleynayaan inay caadi tahay in la galmoodo.
Waxay tiri: 'Dhaqankayagu wuxuu ku saabsan yahay muujinta jidhkaaga, taasina waa qodobka caadiga ah ee lagu hayo qaab nololeedka caanka ah ee ay la qabsadeen. Waa dhaqan dhaqameed badan. oo loo arko inay tahay galmo waa mid caadi ah oo ka dhexjirta bulshada maanta waxana ay ka dhigeysaa mid aad u fudud in raga si ay haweenka da 'yar u soo qaataan. Waa dhaqanka iyaga oo ka dhigaya in ay galmoodaan inay noqdaan galmo ka sii badan.
Iskuduwaha asal ahaan wuxuu la kulmay dambiyo 132 ah oo ka dhan ah gabdhaha 100 iyo haweenka da'da yar. Xeer-ilaaliyeyaashu waxay diiradda saareen dembiyada ugu culus iyo maxkamadaynta uu la kulmay eedaymaha 34. Ka dib markhaatiyaasha
Maxkamad la soo taago maxkamad ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo oogay dacwad ay ku soo oogtay maxkamad ku taala magaalada Johannesburg.
Waxa kale oo uu qirtay lix dembi galmo oo ku lug leh aruurinta iyo jinsi aan qaan-gaarin oo la socda gabadh kale oo ah 14. Maxkamadda Sare ee Khamiistii ayaa lagu helay dambi ah toddobo dacwadood oo lagu soo oogay shan dhibanayaal ka dib markii ay 'wareejiyeen' warbaahinta bulshada.
Xeerbeegta ayaa sidoo kale ka helay toban dembi oo kale oo galmo ah, oo ay ku jiraan falal liddi kufsi ah iyo ficil iyo caruur la kulma galmo sharci darro ah.
Ka dib markii dembiga lagu helay denbaabay waxaa soo baxday in Scoular uu u shaqeynayo afar sanadood oo xadhig ah, lagu soo rogay 2014, dembiyo la mid ah laba gabdhood oo aan waxba galabsan.
Magaciisa waxaa lagu daray diiwaanka dembiilayaasha galmada muddo 10 sano ah.
Garsoore Summers Lord Summers xadhigga ilaa Sebtembar 19 Maxkamadda Sare ee Edinburgh.
Wuxuu uga digay Scoular: 'Waa inaadan haysan wax khalad ah oo aad fiirineyso mudo dheer oo xukun ah.'
Marxuumka ayaa mar labaad la gelin doonaa diiwaanka dembiilaha galmoodka waxaana lagu sii haynayaa xabsiga.
25 Luulyo 2018. Mark Blunden, wariyaha wararka iyo teknolojiyadda wuxuu sifiican uga warbixiyay The Reward Foundation iyo arinta cillad la'aanta kacsiga bogga 11 ee Heerka Caawa ee London. Waxaa sidoo kale soo qaaday by ah Bulshada Nigerian.
16 July 2018. Kay Smith wax yar ayuu dib ugu soo qorey warqad uu soo diro Email on Sunday The Times.
15 July 2018. Mary Sharpe waxaa lagu wareysanayaa Isniinta Iskotishka ee ku saabsan mawduucyada casharrada dugsiyada aasaasiga ah oo ay diyaariso Hay'adda Reward Foundation. Page 21. Nooc digital ah ee maqaalkan ayaa la heli karaa halkan.
15 July 2018. Mary Sharpe waxay qortay buuggan oo dhan bogga. Page 38.
15 July 2018. Maqaalka asalka ah wuxuu ka dhex muuqday Scotsman ee bogga 7 waana la arki karaa online (Digniin: sawirku wuxuu kicin karaa). Maqaalka waxaa sidoo kale soo qaatay 'Tax Free Insider'.
4 July 2018. Mary Sharpe iyo Darryl Mead waxaa lagu wareystay SafEd, oo ah bogga internetka ee loogu talagalay dugsiyada sare ee UK. Maqaalka asalka ah ayaa la arki karaa halkan.
28 Febraayo 2018, Mary Sharpe waxaa lagu wareystay adeegga wararka tooska ah ee Isbaanishka Tu Cosmopolis.
25 Febraayo 2018. Qoraal fara badan oo Isbaanish ah oo ku saabsan saameynta sawirrada, oo diiradda lagu saarayo sheekada Gabe Deem, oo ka kooban Darryl Mead iyo Mary Sharpe, iyo sidoo kale Gary Wilson iyo Dr Valerie Voon. Maqaalka oo dhan ayaa la heli karaa halkan.
Sheekada ayaa sidoo kale la heli karaa online at Sunday Times.
Sheekadani waxay sidoo kale ku dhacday Scottish Financial News oo ku saabsan 24 January 2018